Macluumaadka Shirkadda - Weifang Naipute Gas Genset Co., Ltd.
Weifang Naipute Gas Genset Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2008. Xafiiska wuxuu ku yaalaa Xarunta Dhexe ee magaalada Weifang, gobolka Shandong waxaana jira hareeraha taraafikada iyo jawiga wanaagsan. Warshaddu waxay ku taalaa Warshadaha Waxsoosaarka Warshadaha Hormarsan oo leh taageerada dawlada iyo jawiga warshadaha wanaagsan. Maaddaama sumadda NPT la dejiyay, waxyaabaha ugu muhiimsan waa 10kW-1000kW gaas-dhaliye, oo ay ku jiraan aaladda dhaliyaha gaaska dabiiciga ah, aaladda dhaliyaha gaaska noolaha, gaaska gaaska ee saliidda la dejiyo, gaaska gaaska dhuxul dhagaxda la dhigo, gaaska gaaska lpg gaaska iwm iyo NPT waxay ujeeddadeedu tahay ka faa'iideysiga tamar nadiif ah, ilaalinta deegaanka iyo yareynta kharashyada hawlgalka. Kooxda NPT ee shirkadda R&D iyo kooxda maamulka waxay leeyihiin khibrad hodan ah oo ku saabsan R&D, wax soo saarka iyo maamulida. Sanadihii la soo dhaafay, NPT waxay dhistay koox xirfadlayaal ah oo leh teknolojiyad aad u wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan.
Teknolojiyada ayaa hogaamisa alaabada. Wax soosaarka NPT sida ku cad matoor-qaadaha casriga ahi wuxuu dejiyaa geedi socodka horumarinta cilmiga badeecada si adag, isku qas fikirka horumarinta wax soo saarka ugu horumarsan wuxuuna hayaa xiriir dheer iyo wadashaqeyn lala yeesho hay'adaha horumarinta iyo kuleejooyinka aduunka caan ka ah, sida AVL iyo FEV iwm Fikirka fikirka jilitaanka waxqabadka, horumarinta nooca, horumarka waxqabadka, cabbiraadda imtixaanka iyo horumarka isku halaynta ayaa si adag ula jaanqaaday hannaanka sayniska. Taxanaha wax soo saarka ee loo yaqaan 'NPT' waxaa ka mid ah NQ, NW, NS, ND iyo NY iyo baaxadda korantadu waxay gaaraysaa 10 kW illaa 1000 kW.
Kooxdayadu waxay ku hawlanaayeen R & D wax soo saarka tamarta gaaska in ka badan 30 sano oo ku yaal mashiinka weyn ee caanka ah ee Shiinaha
shirkadaha wax soo saarka;
Xirfadeena & Khibradayada
Qalabka matoorka gaaska ee loo yaqaan 'NPT' gaasta ayaa ka gudubtay shahaadada nidaamka tayada caalamiga ah ee ISO9001 iyo shahaadada CE. Xuduudaha farsamada waxay la kulmaan heerarka Shiinaha GB / T8190 (ISO8178). Amniga, adkeysiga iyo ilaalinta deegaanka ayaa ku guuleeystay Shuruucda Warshadaha Qaranka ee laxiriira. Maalmahan, noocyada matoorrada gaaska ee NPT guud ahaan waa la aqoonsaday oo macaamiisha dal iyo dibadba aad ayey u qiimeeyaan. Waxaana si ballaadhan loogu dallacsiiyay oo laga dabaqay dhinacyo badan, sida warshadaha saliidda, warshadaha gaaska dabiiciga, warshad taranka xoolaha oo ballaadhan, mashruuc dhexe iyo weyn oo gaaska noolaha ah, dhuxusha laga qodo, warshadda qashinka lagu rido iwm. Waqtigaan, badeecooyinka NPT waxaa loo dhoofiyay ku dhowaad 40 dal iyo gobol, sida Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska, Ameerika, Japan, Czech, Spain, Sri Lanka, Italy, Australia iyo France iyo in kabadan 100 mashruuc ayaa la fuliyay iyo hawlgalka
Waxay leedahay qalab tijaabo awood sare leh, waxay u ekeysiineysaa xaaladaha isticmaalaha isticmaalaha, waxayna si adag u kormeeraysaa qaabeynta wax soo saarka iyo soosaarka iyo sidoo kale habka tijaabada tijaabada ah;
Wuxuu kaqeybqaatay cilmi baaris iyo mashaariic horumarineed dhanka awooda gaaska, wuuna ku guuleystey abaalmarino horumar cilmiyaysan iyo tikniyoolajiyadeed oo ay soosaaraan dowladaha heerarkasta;
Shirkaddayadu waxay dhistay xiriir iskaashi istiraatiijiyadeed oo guuleysta oo lala yeesho soosaarayaasha matoorrada caanka ah ee gudaha, R & D oo wadajir ah iyo wax soo saar loo xilsaaray.
Shirkadda NPT waxay leedahay injineero badan, kooxdayada R & D waxay fulin karaan naqshadeynta wax soo saarka gaarka ah iyo soo-jeedinta iyadoo la raacayo shuruudaha isticmaalaha;